ပန်ချာပီဘာသာစကား - ဝီကီပီးဒီးယား
'Punjabi' written in Shahmukhi script used in Punjab, Pakistan (top) and Gurmukhi script used in Punjab, India (bottom)
အိန္ဒိယ နှင့် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ
၁၁၃ သန်း (၂၀၁၁–၂၀၁၇)
အနောက်ဘင်္ဂလား (ထပ်တိုး၊ လူဦးရေ၏ ၁၀%ကျော်သော ဒေသများ)
ဘာသာစကားများဌာန၊ ပန်ဂျပ်ပြည်နယ်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ
ပန်ဂျပ် ဘာသာစကား၊ အနုပညာနှင့် ယဉ်ကျေးမှု သိပ္ပံ၊ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ
ပန်ချာပီ ( /pʌnˈdʒɑːbi/ ;  پن٘جابی‎ ရှားဟ်မူခီ : پن٘جابی , ဂူရမူခီ : ਪੰਜਾਬੀ ပန်ချာပီအသံထွက်: [pənˈdʒaːbːi] ) သည် ပန်ချာပီလူမျိုးများ ပြောဆိုသော အင်ဒို-အာရီယန်ဘာသာစကား ဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယ နှင့် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ပန်ဂျပ် ဒေသတို့မှဖြစ်သည်။ ပန်ချာပီသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ၉ ခုမြောက် အကျယ်ပြန့်ဆုံးပြောဆိုကြသော ဘာသာစကားဖြစ်သည်။ ပန်ချာပီသည် ပါကစ္စတန်တွင် အကျယ်ပြန့်ဆုံး ဘာသာစကားဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယတွင် ၁၁ ခုမြောက် အကျယ်ပြန့်ဆုံးဘာသာစကားဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယတိုက်ငယ် တွင် တတိယလူပြောအများဆုံး ဘာသာစကားဖြစ်သည်။ ပန်ချာပီသည် အင်္ဂလန်တွင် တတိယမြောက် လူပြော အများဆုံးဘာသာစကားဖြစ်ပြီး ကနေဒါတွင် ပဉ္စမမြောက် လူပြောအများဆုံးဘာသာစကားဖြစ်သည် ။ ၎င်းသည် အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု ၊ အမေရိကန် ၊ ပြင်သစ် ၊ သြစတြေးလျ ၊ နယူးဇီလန် ၊ အီတလီ နှင့် နယ်သာလန် တို့တွင်လည်း သိသာထင်ရှားစွာ တည်ရှိသည်။
ပန်ချာပီဘာသာစကားကို ဒေသခံပြောဆိုသူဦးရေ ၁၁၃ သန်း ရှိပြီး ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင် သန်း ၈၀ ကျော်ဖြစ်သည်။ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ ပန်ဂျပ်ပြည်နယ်တွင် ပန်ချာပီဘာသာစကားသည် ပြည်နယ်သုံးဘာသာစကားအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ပန်ချာပီဘာသာစကား ပြောဆိုသူ ၃၁.၃ သန်း (၂၀၁၁ အရ) ရှိပြီး ပန်ဂျပ်ပြည်နယ်၏ တရားဝင်ရုံးသုံးဘာသာစကား ဖြစ်သည်။
↑ NCLM 52nd Report။ NCLM (15 November 2016)။ 25 May 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 23 March 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Punjab mandates all signage in Punjabi, in Gurmukhi script"၊ 21 February 2020။ 0
↑ "All milestones, signboards in Haryana to bear info in English, Hindi and Punjabi: Education Minister"၊ The Indian Express၊3March 2020။
↑ "Punjabi, Urdu made official languages in Delhi"၊ The Times of India၊ 25 June 2003။
↑ "Multi-lingual Bengal"၊ 11 December 2012။
↑ India၊ Tribune (19 August 2020)။ Punjabi matric exam on Aug 26။
↑ Nordhoff၊ Sebastian; Hammarström၊ Harald; Forkel၊ Robert; Haspelmath၊ Martin, eds. (2013)။ "Eastern Panjabi"။ Glottolog။ Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။
↑ Nordhoff၊ Sebastian; Hammarström၊ Harald; Forkel၊ Robert; Haspelmath၊ Martin, eds. (2013)။ "Western Panjabi"။ Glottolog။ Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပန်ချာပီဘာသာစကား&oldid=739575" မှ ရယူရန်
Punjabi (Western)ဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
ပန်ချာပီဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
ဤစာမျက်နှာကို ၃၁ မတ် ၂၀၂၂၊ ၀၀:၁၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။